महिलाहरुले यौन सम्पर्कका बेला आँखा चिम्लिनुको रहस्य - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् रु के छ यसको कारण ?
एक अध्ययन अनुसार जसै हाच्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् । खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
एक सर्भे अनुसार कुनै महिला यदि यौन सम्पर्कका क्रममा आँखा बन्द गर्छन् भने यसको अर्थ हुन्छ कि उनले यौन सम्पर्कको पुरापुर आनन्द लिइरहेका छन् । शोधबाट यो कुरा थाहा भएको छ कि, आँखा बन्द हुनुसँग दिमागको गहिरो सम्बन्ध छ । यस्तो मानिन्छ कि, यदि दिमाग खुला रहन्छ भने महिलाको ध्यान पार्टनरमाथि पर्न जान्छ । यसले उनको ध्यानभंग हुन्छ ।
त्यहीकारण उनीहरु क्लाइमेक्ससम्म पुग्न पाउँदैनन् । यौन सम्पर्कका क्रममा दम्पती एकअर्कावीच एकाकार भएको अनुभूत गर्छन् । उनीहरु आफुहरुवीचैका इन्टीमेसी र केमेस्ट्रीमा इन्जोए गरिरहेका हुन्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा उनीहरु पार्टनरलाई सहयोग र सुरक्षा महसुस गराउन चाहन्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा एकाग्रता एकदमै जरुरी हुन्छ ।
आँखा खुला हुँदा बाहिरी चिज एवं आवाजले यौनप्रतिको ध्यान भंग गरिदिन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरु आँखा बन्द गर्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनुमा लाज पनि एउटा कारण हुनसक्छ । यद्यपी यस्तो लाज भने पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा हुने गर्छ । आफुलाई सर्वाङ्ग बनाइरहँदा उनीहरु लजाउँछन् । असहज महसुस गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ।